Indlu enendawo yokuphola etofotofo ekwindawo enamahlathi nesidlo sakus - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola etofotofo ekwindawo enamahlathi nesidlo sakus
Angomont, Grand Est, France
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJohanna
Ngaphantsi kweVosges, le ndlu yimizuzu eyi-10 ukusuka kumachibi asePortugal, kwimizuzu eyi-15 ukusuka kwiZiko LeParcs. Indawo ethe cwaka, eyenziwe ngamaplanga, iikhilomitha eziyi-10 ukusuka eCarrefour Market, umbhaki, ivenkile yotywala.
Iindawo ezinkulu ezinetreyini ngaphambili nangasemva kwendlu,indawo yokupaka, ukuya kutsho kwiindawo eziyi-4 zokupaka. Indlu enabo bonke ubutofotofo bale mihla, igumbi lokuhlala elibiyelweyo, ikhitshi elinento yonke, amagumbi okulala ayi-3.
Isidlo sakusasa seentsuku ezimbini zokuqala. Izilwanyana zasekhaya zivumelekile kodwa kuza kufuneka uzisuse izinto ezimdaka. Ayikwazi ukukhwela iisofa neebhedi.
Le ndlu iyasebenza.
Uza kuba nayo yonke into oyidingayo ukuze upheke uze upheke. Ukongezelela, uza kufumana umatshini we-raclette, ii-pancakes zeepati, umatshini wokwenza i-waffle, i-plancha, izixhobo zasendlini, umatshini wokwenza ikofu we-Nespresso, i-toaster, iketile, i-microwave, i-friji-freezer, umatshini wokuhlamba impahla, iayini,
Imidlalo yebhodi kunye neencwadi, isiginci, i-piamo ye-elektroniki, i-karaoke, izithethi ze-bluetooth kwisilingi.
Iindawo ezikufutshane zithule kakhulu. Le ndlu isecaleni yaye ingqongwe ngamahlathi.
Ndiza kubakho xa ndifika naxa ndiphuma.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Angomont